Ukuba unesondo elincinci, unokukwazi ukugcina imali ngokuyilungisa ngeeplagi endaweni yokuthenga ithayi entsha. Esi sikhokelo sikhombisa indlela yokwenza lo lungiso olungabonakaliyo malunga nemizuzu engama-15. Okokuqala, khangela ukuba ukhangele apho kuhamba khona. Ukuba kusemacaleni, musa ukucima ukuvuza. Umzila wecala lakho liphantsi kwemimandla eyahlukeneyo kunye neengcinezelo kunengxenye edibanisa nomgwaqo. Ukufaka i-sidewall kungabangela ukuqhuma, ngokubhekiselele kwi-National Highway Traffic Safety Administration.
UHeinrich van den Berg / Getty Izithombe
Uya kufuneka ususe isondo esicacileyo kwisithuthi sakho. Ukwenza oku, kuya kufuneka udibanise ncwadana yomnini wakho kwaye usebenzise i- tire kunye neethuluzi ezilungiselelwe zonke izithuthi. Qinisekisa ukuba unako ukwenza oku kwindawo ephephile, kude nemoto yendlela. Ukuba awukwazi ukukhusela isondo elincinci ngokukhuselekileyo, fowuna uchwepheshe ukuze uncede.
UMark Lenhardt / EyeEm / Getty Izithombe
Ukucima ivili uze uhlolisise yonke into yokunyathela kunye nendawo engasemva ukufumana indawo yokuphambuka apho kuvuza khona. Kungaba into elula njengesikhonkwane okanye isiqwenga esibandakanyiweyo kwinqanaba, apho iimeko zokubamba ivili ziza kuba lula. Musa ukuyikhupha ngaphandle nje, nangona kunjalo. Ukuba awukwazi ukubona into ehlabayo itrayi yakho, kuya kufuneka ufumane ukuvuza ngezinye iindlela.
Phawula i-Spot yokuCoca
Ngaphambi kokuba ususe isilumko okanye udibanise isondo sakho esicubileyo, thabatha ingqungquthela yentayili uze uyibeke ngaphantsi kwendawo apho iqhube khona itayiti. Ngepeni, phawula indawo echanekileyo ene-nail kuyo. Oku kuya kukuvumela ukuba ufumane umxhaka kwakhona xa into ephumayo. Ungakhathazeki ukuba uyakhohlwa ukumakisha, okanye ukuba i-tape yakho ivela.
Susa isikhombiso okanye Isikratshi
Allkindza / Getty Izithombe
Hamba uye ususe isikhonkwane okanye ujijime kwivili. Unokuba ufanele ukumbamba isikhonkwane kunye neepelisi ukuba kunzima ukuba ususe. Ukuba i-screwdriver, unokwazi ukusigxotha nge-screwdriver. Qinisekisa ukuba itayiti isesigxina, esicacileyo xa usenza oku. Nokuba isondo elincinci lingasuka kuwe ukuba awuqapheli.
Kwi-plug yakho itekiti, uya kubona isixhobo esibukeka njengefayile ejikelezileyo ngesiphathi. Oku kusetyenziselwa ukucoca kunye nokugqithisa umgodi kwipaneli yakho phambi kokungena. Thatha le sixhobo uze uyiqhumisele emhadini. Yiphakamisa iphinde ihlawule amaxesha ambalwa ukuze ungene ngaphakathi. Iipompo ezimbalwa ezinamandla kufuneka zenze. Le ngxenye ebalulekileyo yokulungiswa kwamatye.
Xhawula isixhobo soPhulo
Ikiti yakho yokulungisa umthamo iqulethe iitata ezinamathelisi "iimbongolo" oza kuyidinga kwisinyathelo esilandelayo. Yenza i-peel enye kwaye uyixoxe ngokusebenzisa isixhobo esinalo iso kwelinye icala njengenaliti enkulu. Uya kufuneka ufeze ukuphela kwesidumbu ukuze ungene kuyo, kodwa inokwenziwa. Yibambe kuze kube yilapho isekelwe kwisixhobo sokuxhuma.
Ngemfudu ekhonkxiweyo kwisixhobo sokuxhuma, gcina isiphelo sesixhobo kwindawo yomda wakho. Xa sekusele nje encinane, sebenzisa uxinzelelo ukwenzela ukuba isixhobo kunye neeplagi zingene emgodini. Pushisa iplagi ukuya kutsho malunga nesiqingatha intshi. Emva koko, bhenca ithuluzi lokuxhuma ngqo; iplagi ihlala apho ifuna ukuba khona, emgodini. Ukuba unento ethile yokunqumla iiphelo zeplagi kunye, qhubeka uye uyiqhewule ngokusondeza kwidare. Ukuba akukho nto iyenzayo, unokuyixhoma kamva.
Ekugqibeleni, gcwalisa ivili lakho ngomoya kwixinzelelo elifanelekileyo lomtya kwaye ulibuyise. Ukuba awuzange ube nevili lakho lijikeleze kwaye lilungele ixesha elithile, le nto ingaba yithuba elifanelekileyo lokutyelela umatshini wakho wendawo kwaye wenze njalo. Kuya kwandisa ubomi bamatayitha akho.
Indlela Yokuvuselela Ibhetri Yomlilo Efile
Nguwuphi na umyalelo oya kuwuqinisa i-My Lug Nuts?
Indlela yokusebenzisa i-Torque Wrench
Indlela Yokulungisa Radiator Ephumayo
Umculo waseMexico oDume kakhulu - iTeano, Norteno, eBanda
Zingcwalise Izixhobo Zakho Zomlingo
Izixhobo ezi-10 eziLungileyo eziLungileyo zee-60s
Ingaba iRhafu yeNtengiso yeSizwe ingafaka iRhafu yeMali e-US?
Ukudlala iiPetal emhlabeni weRose
Biography ye-Alejandro Aravena
Faka iZwi Inkcazelo kunye nemizekelo
Ngowe-1972 US Open: I-Nicklaus iphumelela kwi-Pebble Beach
Udidi lwehlabathi lweFifa